XIISAD GANACSI OO KA TAAGAN BUUHOODLE WARBIXIN!! | SMC
Home WARARKA MAANTA XIISAD GANACSI OO KA TAAGAN BUUHOODLE WARBIXIN!!
XIISAD GANACSI OO KA TAAGAN BUUHOODLE WARBIXIN!!
Buuhoodle waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa xiisad ganacsi oo u dhaxaysa koox ganacsatada waawayn ee magaalada ah iyo ganacsatada Reer Maayland loo yaqaano (RRA) oo isugu jira dhalinyaro deegaanka ah iyo kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka.
Qorshahan waxaa dabada ka riixaya qaar ka mid ah ganacsatada waawayn ee magaalada kuwaas oo ka biyo diidsan qiimaha jaban ee ganacsatada RRA-da wax ku iibiyaan waxaana ay u arkaan inuu dhabarjab ku yahay ganacsigooda.
Shirar is daba joog ah oo kooxda hawshan wadata ay wadeen ayaamihii lasoo dhaafay ayaa sii xoogaystay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana ay soo jeediyeen in magaalada laga saaro ganacsatada RRA-da Reer Maayland.
Cuqaasha magaalada ayay kooxda hawshan wadata hore ula kulmeen iyaga oo qorshahan usoo bandhigay balse cuqaasha magaalada ayaa ku gacansaydhay arrintaa.
Ganacsatada waawayn ee magaalada ayaa qiimo sare wax ku iibiya halka ganacsatada RRA-du ay qiimo aad u jaban wax ku iibiyaan waxaana arrintan dan ugu jirtaa dadka danyarta ah ee aan ganacsatada waawayn wax ka iibsan karin waana halka ay ku salaysan tahay khilaafka taagan.
Kooxdan ganacsatada waawayn ayaa ku eedeeyey ganacsatada RRA-da Reer Maayland inaysan bixin qaadhaanka iyo wixii la mid ah laakiin Jimciihii ugu danbeeyey waxay masaajidka wayn kaga aydhawaaqeen lacag 700$ oo ay ku bixiyeen dhismaha masaajidka loo dhisayo garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle.
Maanta oo Axad ah waxay kooxda ganacsatada waawayni casuumeen cuqaasha gobolka iyaga oo isku dayaya inay ka dhaadhiciyaan fikirkooda ah in ganacsatada RRA-da Reer Maayland magaalada laga saaro laakiin shirkaas oo wali socda wixii kasoo baxa halkan kala soco.
Previous articleMunaasabad xil wareejin oo losameeyay Gud. Baarlamaanka Hirshabeelle
Next articleDowladda Soomaaliya & Hay’adda FAO oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah